Introvert တွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်နည်း (၆) သွယ် -
Posted on January 11, 2019 January 11, 2019 Author Ei Mon	Comment(0)
တျောက်တည်း နေရတာ ကြိုက်တဲ့ ချိဖတို့ ချိမတို့အတွက်
Introverts သမားတွေက တစ်ယောက်တည်း နေရတာ ကြိုက်တတ်သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သူတို့အတွက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက ထင်သလောက် မကျယ်ပြန့်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်တဲ့အခါ ကွန်ရက်ဖြန့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက လိုအပ်လာပြီဖြစ်လို့ introverts တွေ အခက်တွေ့ပါပြီ။ networking event တွေ မဖြစ်မနေ တက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ အဆင်ပြေချောမွေ့ချင်ရင်တော့ အိမွန်ပြောတဲ့ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာမှ ဖြစ်မှာနော်…
၁။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကွန်ရက် ဖြန့်ပါ။
အလုပ်သဘောအရ လူချင်းတွေ့ပြီး အိုင်ဒီယာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ လူကြောက်တဲ့ introvert သမားတွေ ချွေးပြန်ရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လို့ စိုးရိမ်စရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ networking events ပွဲတွေတက်ဖို့ ကြေညာတဲ့အခါ ကိုယ့်နယ်ပယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာမြင်ရင် join ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးတော့ အွန်လိုင်းကနေပြီး အရင်ဆုံး မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့အခါ အပြင်မှာ လူချင်းတွေ့ ဆွေးနွေးချိန်မှာ အဆင်ပြေပါပြီ။
၂။ တစ်ယောက်ချင်းစီကို သေချာလိုက်ပေါင်းပါ။
Networking တိုင်းက ပွဲအကြီးစား ကျင်းပပြီး တွေ့ဆုံဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ လူတွေ အဖွဲ့လိုက်နဲ့ စကားပြောရတာ ခက်ခဲတယ်လို့ ထင်ရင် တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ သေချာစကားပြောကြည့်ပြီး ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်း ရေရှည်ခင်မင်သွားအောင် အဆက်အသွယ် လုပ်ပေးရပါမယ်။ Introvert တစ်ယောက်အတွက် ဒါက ခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ ကြိုးစားကြည့်ရမှာပေါ့နော်..
၃။ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေး ထိန်းထားပါ။
မိတ်ဆွေဟောင်းတွေ ပါလာရင် Introvert လေးတွေအတွက် ပိုတောင် အဆင်ပြေသေးတယ်နော်.. ကိုယ်စကားပြောစရာ ရပြီလေ… ဒါပေမဲ့ Networking ပွဲမှာ တွေ့တာမို့ ပွဲရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေတော့ ပြောပေးပေါ့နော်… ဒီမှာ ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်ရသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အပြင်မှာ မကြာမကြာ တွေ့ပြီး ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းထားလို့ ရပြီလေ.. ဒါကလည်း ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်နည်း တစ်ခုပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်…
Related article>>>Introvert (ဘာသိဘာသာနေတတ်သူ) ယောင်းတို့အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်မယ့် အလုပ်အကိုင်များ
၄။ ပွဲမှာ တွေ့လာ၊ ခင်လာသူတွေနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်သွယ်ပါ။
ပွဲတက်လာသူတွေထဲက business cards တွေ စုထားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ အီးမေးလ်ပို့ရင်း ဆက်သွယ်ပါ။ အီးမေးလ်ကို ဘာအကြောင်းပို့ရမှာလဲဆိုတော့ ပြောစရာ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ ပွဲအကြောင်းပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်… နောက်ပိုင်း မေးလ်တွေကျမှ တခြား အကြောင်းတွေ ပြောပေါ့နော်… ဒါဟာလည်း လူစိမ်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုယူနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ရက်လည်း ပိုပိုကျယ်လာတာပေါ့နော်…
ပွဲတက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ဒီပွဲမှာ ကိုယ်ရွေးပြီး စကားပြောလို့ရမယ့်သူကို ကြိုတင်ရှာထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ်ကစကားနည်းတဲ့သူဖြစ်လို့ ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာကို ပွဲလာနိုင်တဲ့ လူစာရင်းကနေ တစ်ဆင့်လည်း ခန့်မှန်းလို့ ရတယ် မဟုတ်လား…
Networking ပွဲတော့ တက်ပါရဲ့။ လူများများနဲ့ စကားမပြောချင်လို့ ထောင့်နားမှာ သွားထိုင်ပြီး ဖုန်းသုံးနေတာမျိုးတွေ၊ တစ်ယောက်တည်း တစ်ကမ္ဘာဆောက်နေတာမျိုးတွေက တခြားသူအမြင်မှာတော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပွဲမှာ တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ထည့်ပြီး လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းကြည့်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ နေရတာ သက်တောင့်သက်သာ မရှိဘူးဆိုရင်တောင် အပြင်မှာတော့ ပြုံးထားပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်က introvert မို့ networking event တွေ တက်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့ ယောင်းရေ။ ယောင်းလိုပဲ ဘဝတူ introvert တွေ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာကိုတော့ မမေ့နဲ့နော်… အင်း ပြောသွားတဲ့ နည်းတွေကတော့ ဟုတ်ပါရဲ့.. Networking ပွဲတွေကို ဘယ်လိုတက်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ ခေါင်းအရမ်းကြီး စားမနေပါနဲ့… အက်ဒ်မင်တို့ For Her Myanmar Club မန်ဘာဝင်တွေအတွက် တစ်လတစ်ခါ လုပ်ပေးနေတဲ့ ပွဲလေးတွေ လာတက်လို့ ရပါတယ်လို့… ပြီးတော့ ပိတ်ရက်တွေမှာ ဘယ်ပွဲတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း တစ်ပတ်တစ်ခါ အက်ဒ်မင်တို့ ရေးပေးနေတယ်လေ.. သိချင်ရင်တော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း စောင့်ကြည့်ပေါ့နော် 😀 (ဤကား ကြော်ငြာ 😛 )
Introvert တွေက သူစိမ်းတွေနဲ့ဆို စကားလုံးဝမပြောချင်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်မနေ အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းတွေ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောရပြီဆိုရင်လည်း သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် ပြောပြတတ်တာမျိုးလည်း ရှိသေးတာကိုး.. ဆိုတော့ ဒါကို အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချပြီး ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်နိုင်ပါစေလို့…
Reference: balancecareers, psychologytoday
တြောကျတညျး နရေတာ ကွိုကျတဲ့ ခြိဖတို့ ခြိမတို့အတှကျ
Introverts သမားတှကေ တဈယောကျတညျး နရေတာ ကွိုကျတတျသူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ သူတို့အတှကျ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးက ထငျသလောကျ မကယျြပွနျ့ပါဘူး။ လုပျငနျးခှငျထဲရောကျတဲ့အခါ ကှနျရကျဖွနျ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးက လိုအပျလာပွီဖွဈလို့ introverts တှေ အခကျတှပေ့ါပွီ။ networking event တှေ မဖွဈမနေ တကျဖို့ အကွောငျးဖနျလာတဲ့အခါ အဆငျပွခြေောမှခေ့ငျြရငျတော့ အိမှနျပွောတဲ့ ဒီအခကျြလေးတှကေို လိုကျနာမှ ဖွဈမှာနျော…
၁။ အှနျလိုငျးပျေါကနေ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကှနျရကျ ဖွနျ့ပါ။
အလုပျသဘောအရ လူခငျြးတှပွေီ့း အိုငျဒီယာနှီးနှောဖလှယျပှဲလုပျမယျလို့ စဉျးစားလိုကျတဲ့အခါ လူကွောကျတဲ့ introvert သမားတှေ ခြှေးပွနျရပါပွီ။ ဒါပမေဲ့လို့ စိုးရိမျစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာ networking events ပှဲတှတေကျဖို့ ကွညောတဲ့အခါ ကိုယျ့နယျပယျနဲ့ သကျဆိုငျတာမွငျရငျ join ထားလိုကျရုံပါပဲ။ ပွီးတော့ အှနျလိုငျးကနပွေီး အရငျဆုံး မိတျဆှဖှေဲ့ထားတဲ့အခါ အပွငျမှာ လူခငျြးတှေ့ ဆှေးနှေးခြိနျမှာ အဆငျပွပေါပွီ။
၂။ တဈယောကျခငျြးစီကို သခြောလိုကျပေါငျးပါ။
Networking တိုငျးက ပှဲအကွီးစား ကငျြးပပွီး တှဆေုံ့ဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ လူတှေ အဖှဲ့လိုကျနဲ့ စကားပွောရတာ ခကျခဲတယျလို့ ထငျရငျ တဈယောကျခငျြးစီနဲ့ သခြောစကားပွောကွညျ့ပွီး ခြိတျဆကျကွညျ့ပါ။ တဈယောကျမဟုတျ တဈယောကျ မိတျဆှဖွေဈသှားတဲ့အခါမှာလညျး ရရှေညျခငျမငျသှားအောငျ အဆကျအသှယျ လုပျပေးရပါမယျ။ Introvert တဈယောကျအတှကျ ဒါက ခကျခဲတယျလို့ ဆိုပမေဲ့ နညျးနညျးတော့ ကွိုးစားကွညျ့ရမှာပေါ့နျော..
၃။ မိတျဆှဟေောငျးတှနေဲ့လညျး ဆကျဆံရေး ထိနျးထားပါ။
မိတျဆှဟေောငျးတှေ ပါလာရငျ Introvert လေးတှအေတှကျ ပိုတောငျ အဆငျပွသေေးတယျနျော.. ကိုယျစကားပွောစရာ ရပွီလေ… ဒါပမေဲ့ Networking ပှဲမှာ တှတေ့ာမို့ ပှဲရဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ ဆိုငျတဲ့ အကွောငျးလေးတှတေော့ ပွောပေးပေါ့နျော… ဒီမှာ ပွနျပွီးအဆကျအသှယျရသှားခဲ့ပွီဆိုတော့ နောကျပိုငျးမှာလညျး အပွငျမှာ မကွာမကွာ တှပွေီ့း ဆကျဆံရေးကို ထိနျးထားလို့ ရပွီလေ.. ဒါကလညျး ကှနျရကျဖွနျ့ကကျြနညျး တဈခုပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ…
Related article>>>Introvert (ဘာသိဘာသာနတေတျသူ) ယောငျးတို့အတှကျ အသငျ့လြျောဆုံးဖွဈမယျ့ အလုပျအကိုငျမြား
၄။ ပှဲမှာ တှလေ့ာ၊ ခငျလာသူတှနေဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆကျသှယျပါ။
ပှဲတကျလာသူတှထေဲက business cards တှေ စုထားပွီး နောကျတဈနမှေ့ာ အီးမေးလျပို့ရငျး ဆကျသှယျပါ။ အီးမေးလျကို ဘာအကွောငျးပို့ရမှာလဲဆိုတော့ ပွောစရာ တဈခုတညျးရှိတဲ့ ပှဲအကွောငျးပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ… နောကျပိုငျး မေးလျတှကေမြှ တခွား အကွောငျးတှေ ပွောပေါ့နျော… ဒါဟာလညျး လူစိမျးတှနေဲ့ ရငျးနှီးမှုယူနညျးတဈမြိုးပါပဲ။ ကိုယျ့ရဲ့ ကှနျရကျလညျး ပိုပိုကယျြလာတာပေါ့နျော…
ပှဲတကျမယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးတာနဲ့ ဒီပှဲမှာ ကိုယျရှေးပွီး စကားပွောလို့ရမယျ့သူကို ကွိုတငျရှာထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။ ကိုယျကစကားနညျးတဲ့သူဖွဈလို့ ဘယျလိုလူတှနေဲ့ပိုအဆငျပွနေိုငျမလဲဆိုတာကို ပှဲလာနိုငျတဲ့ လူစာရငျးကနေ တဈဆငျ့လညျး ခနျ့မှနျးလို့ ရတယျ မဟုတျလား…
Networking ပှဲတော့ တကျပါရဲ့။ လူမြားမြားနဲ့ စကားမပွောခငျြလို့ ထောငျ့နားမှာ သှားထိုငျပွီး ဖုနျးသုံးနတောမြိုးတှေ၊ တဈယောကျတညျး တဈကမ်ဘာဆောကျနတောမြိုးတှကေ တခွားသူအမွငျမှာတော့ မသငျ့တျောပါဘူး။ ဒီတော့ ပှဲမှာ တတျနိုငျသမြှ စိတျထညျ့ပွီး လူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးကွညျ့ပါ။ စိတျထဲမှာ နရေတာ သကျတောငျ့သကျသာ မရှိဘူးဆိုရငျတောငျ အပွငျမှာတော့ ပွုံးထားပါ။
ဒီတော့ ကိုယျက introvert မို့ networking event တှေ တကျရတာ အဆငျမပွဘေူးလို့ မတှေးပါနဲ့ ယောငျးရေ။ ယောငျးလိုပဲ ဘဝတူ introvert တှေ ရှိနသေေးတယျ ဆိုတာကိုတော့ မမနေဲ့နျော… အငျး ပွောသှားတဲ့ နညျးတှကေတော့ ဟုတျပါရဲ့.. Networking ပှဲတှကေို ဘယျလိုတကျရမှာလဲဆိုရငျတော့ ခေါငျးအရမျးကွီး စားမနပေါနဲ့… အကျဒျမငျတို့ For Her Myanmar Club မနျဘာဝငျတှအေတှကျ တဈလတဈခါ လုပျပေးနတေဲ့ ပှဲလေးတှေ လာတကျလို့ ရပါတယျလို့… ပွီးတော့ ပိတျရကျတှမှော ဘယျပှဲတှေ လုပျနတေယျဆိုတာကိုလညျး တဈပတျတဈခါ အကျဒျမငျတို့ ရေးပေးနတေယျလေ.. သိခငျြရငျတော့ ဗုဒ်ဓဟူးနတေို့ငျး စောငျ့ကွညျ့ပေါ့နျော 😀 (ဤကား ကွျောငွာ 😛 )
Introvert တှကေ သူစိမျးတှနေဲ့ဆို စကားလုံးဝမပွောခငျြဘူးဆိုတာ သိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မဖွဈမနေ အလုပျကိစ်စအကွောငျးတှေ၊ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးတှေ ပွောရပွီဆိုရငျလညျး သသေခြောခြာ စစေ့စေ့ပျစပျ ပွောပွတတျတာမြိုးလညျး ရှိသေးတာကိုး.. ဆိုတော့ ဒါကို အားသာခကျြတဈခုအနနေဲ့ အသုံးခပြွီး ကှနျရကျဖွနျ့ကကျြနိုငျပါစလေို့…
References: balancecareers, psychologytoday
Tagged Career, introverts, networking, tipps
ဘွဲ့မရခင်မှာ အလုပ်တစ်ခုရနေဖို့ ကျောင်းတက်နေကတည်းက အချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ?
Posted on November 19, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar
ဒီအချက်တွေ ကျောင်းတက်တုန်းက သိခဲ့ရင် အကောင်းသား :'(
လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ ခွဲဝေပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၆) သွယ်
Posted on March 25, 2019 Author Sugar Cane
နံပါတ် (၅) အချက်ကတော့ တကယ်ကို လိုတာနော်… လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်လက်အောက်က လူတွေကို အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးဖို့ လိုအပ်လာပြီပေါ့။ ဒီအခါ အလုပ်တာဝန်တွေကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ ခွဲဝေပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နေရာတကာ ကိုယ်က လိုက်ပါပြီး လိုက်ပြောနေရမယ်၊ အသေးစိတ်ကစ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းအတော်နည်းနေပါပြီ။ ကိုယ့်အတွက် တခြားအရာတွေ လုပ်ရမယ့် အချိန်တွေလည်း လျော့သွားသလို အလုပ်တွေပိုပြီး ဝန်ပိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေ တိုးတက်ဖို့လည်း နှေးကွေးသွားစေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကြောင့် အလုပ်တာဝန်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲပေးတတ်ဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာတော့တာပါပဲ။ အလုပ်တာဝန်တွေ ခွဲဝေပေးတဲ့အခါ သိထားသင့်တာတွေကို ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင် … (၁) လူမှန်ကို ရွေးပြီး ခွဲဝေပေးပါ။ ကိုယ် […]
Posted on May 7, 2017 Author Rin
လူစိမ်းတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံ ကြောက်သလို ခံစားနေရလား?
Gerund ဆိုပြီး လူသိနည်းတဲ့ Ving form
ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကို သွန်သင်ဆုံးမလိုတဲ့မိဘများအတွက် အကြံပြုချက်